Laos, ala nke nde enyí | Akụkọ Njem
Laos, ala nke otu enyí nde
N'ihi agha Indochina na ikewapụ nke ọchịchị ndị ọchịchị sochiri, Laos ebiela ọtụtụ iri afọ na azụ ya na njem. Ọ bụ ezie na ọnọdụ a nwere ike inwe ụfọdụ nsonaazụ na-adịghị mma, o mekwara ka nchekwa nke obodo na okike dị mma, wee bụrụ ezi paradaịs nke njem nlegharị anya na-enyocha.
Site na Vietnam abanyela n'okporo ụzọ nke ndị ọrụ njegharị buru ibu na Cambodia ịgbaso otu ụzọ ahụ, nke a na-akpọ 'ala nke a nde enyí'bụ nnukwu ihe nzuzo ikpeazụ nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Ndị na-aga Laos agaghị ahụ ndụ anụ ọhịa, osimiri mara mma, ma ọ bụ ihe ncheta ndị mara mma, mana ha ga-ahụ mba jupụtara na ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ jupụtara, obodo ndị jikọtara ụlọ Buddha nke ọma na ụlọ ọchịchị ndị France na nke ime mmụọ nke Asia, ọgwụgwọ zuru oke. chọta onwe gị.
3 Ndi Mekong
4 Mbara nke Pitchers
5 Wat Phu na Bolaven Plateau
6 Eziokwu na-akpali mmasị banyere Laos
Vientiane na-anọchite anya kọntaktị mbụ na mba ahụ maka ọtụtụ ndị njem. Na mbido, okporo ámá ya nwere ike ịbụ isi awọ n'ihi usoro ụdị Soviet jupụtara n'isi obodo mana ọ kwesịrị ka eleta maka ọtụtụ nri. Nke mbu bu na Vientiane bu ihe kachasi nso n’obodo buru ibu na Laos n’ile anya ahia, ulo ahia, ulo nri na ihe ncheta. Ka emechara, ebe a bụ Pha That Luang, Wat Si Saket na Haw Phra Kaew, nke nwere oge Emerald Buddha nke oge ụfọdụ. Tụkwasị na nke ahụ, gburugburu obodo ahụ na-enye ohere maka ihe ndị na-akpali akpali ịmalite ịme ecotourism ebe ọ bụ naanị kilomita iri abụọ dị n'akụkụ mmiri iyi Tad Leuk na Tad Xay yana oke ọhịa kachasị ochie na Laos.
Otu UNESCO kwupụtara Ebe Nchịkwa Ihe Worldwa na 1995, isi obodo mbụ nke obodo ahụ bụ obodo kachasị mma na mpaghara Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia niile. Obodo a bụ okpukpe na njem nleta etiti nke Laos na n’ime ya igwe mmadụ na mkpọmkpọ ebe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. Agbanyeghị, Luang Prabang nwere amara zuru oke ka ọ ghara ịdị na-agwụ ike.
A na-enye ụlọ oriri na ọ restaurantsụ hotelsụ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ sara mbara ma dị mma. Shopslọ ahịa ndị mgbe ochie, ọrụ aka na ahịa okporo ámá na-adọta ọtụtụ narị ndị njem na ndị Laoti kwa ụbọchị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga leta Luan Prabang, ị ga-achọ atụmatụ njem ebe ị ga-efu efu n'etiti ebe nkiri ya: ihe karịrị ụlọ nsọ Buddhist iri atọ mara mma (Wat Xieng Thong site na 1560 bụ ihe kachasị mma na Laos), ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọchịchị na-adịghị mma na Osimiri Mekong, isi iyi ndu na usoro nkwukọrịta na Eshia.
Gagharị na Mekong bụ ụzọ kachasị mma iji chọpụta mba ahụ: chọpụta akụkọ ntolite ya, ụzọ ndụ nke ndị ya ma ọ bụ ụfọdụ ala mara mma nke nnukwu osimiri a. Ọ dị kilomita 4.000 n'ogologo ma gafere Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia na Vietnam. Ọbara ya bara ụba dị mkpa maka ịkọ osikapa ka ọ bụrụ ụzọ ọzọ e si ebi ndụ n'akụkụ a nke ụwa, na-enye ihe ruru ahịhịa atọ n'otu afọ. Ya mere, enwere ike ịsị na Osimiri a bu nkpuru obi nke Laos ebe ọ bụ na ọ gafere ya site na ugwu gaa na ndịda ma nye ya njirimara ya.
Mbara nke Pitchers
Mpaghara a nwere mmasị banyere agha-akụkọ ihe mere eme dịka ọ ka na-echekwa akara nke agha Indochina. Laos nwere ndekọ maka ịbụ mba kacha gbaa bọmbụ n'ụwa. N'oge a na-alụ agha Vietnam, a tụbara bọmbụ na-atụghị na Vietnam na mpaghara ọwụwa anyanwụ Laos na mgbaghara na ndị agha North Vietnamese na-agbaba ebe ahụ. E mere atụmatụ na United States tụbara bọmbụ nde abụọ na Laos, na-egbu ihe karịrị otu nde mmadụ. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke bọmbụ ndị United States na Laos dara na XNUMXs dara na Plain of the Pitchers.
Wat Phu na Bolaven Plateau
Ga njem na ndịda nke obodo ahụ ga-enyere gị aka ịchọpụta Wat Phu, the mkpọmkpọ ebe kachasị mma nke ọdịnala Khmer n'èzí Angkor (Cambodia) na Bolaven Plateau, ebe dị ezigbo mma nke nwere ike ịgagharị na njem elephant site na obodo Tat Lo.
Laos bụ ebe kachasị mma maka ndị hụrụ okike n'anya, ndị njem na ndị na-achọ ezumike zuru ike na ahụmịhe ọdịnala bara ụba.
Eziokwu na-akpali mmasị banyere Laos
Ọ dị mma ịmara onwe gị tupu ị gaa mba ọ bụla. Laos kwesịrị ịrara obere nkwadebe tupu oge eruo iji nwee ike izu ike ụbọchị ole na ole na mba a magburu onwe ya na udo zuru oke. Naanị nakọta ụfọdụ data bara uru dịka ndị a:
Ọnụ ọgụgụ: Laos nwere ihe dị ka nde mmadụ 5,5.
Asụsụ: Lao. Na French, a na-akpọ ndị bi ebe Lao taa "les laos," aha na-adabaghị adaba.
Ego: Kip (otu euro ruru 13 kip)
Ọrịa: patba ọcha n'anya A na B, ọgbụgbọ na ọnyụnyụ, tetanus, ịba na ịba ahụ ọkụ. Anwụnta na-asọ oyi dị mkpa.
Okpukpe: Theravada Buddha, bụ ngalaba nke okpukpe Buddha.
Oge: GMT + 7 ma ọ bụ Madrid +5 na Madrid +6 dabere n’oge ọkọchị / oge oyi.
Gastronomy: Nri Lao nke ọdịnala kpọrọ nkụ, sie ike ma dịkwa ụtọ. Abụọ n’ime efere kachasị ewu ewu bụ Laap na Tam Mak Houng.
Uwe: Anyị na-adụ ndị ọbịa ọdụ ka ha yikwasị uwe dị mfe, nke fechaa nke a na-asacha ngwa ngwa.
Laos Tourism weebụsaịtị: www.visit-laos.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Laos » Laos, ala nke otu enyí nde
Lucerne, ndị kasị touristic obodo Switzerland